အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ခန့်ထားရေးအစီအစဉ်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) ၏ အဆိုအရမူ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19) ရောဂါပိုးသည် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်မှ လုံးဝပျောက်ကွယ် သွားနိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုဗစ် -၁၉ နှင့် ပတ်သက်၍ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက် မှန်သမျှသည် ရေတိုလုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်သည်ကို သိထားရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါသည် ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ရန် အချိန် နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ အချို့သော မြို့ပေါ်ရှိ ကျောင်းများတွင် လက်ရှိကျောင်းသားဦးရေမှာ အဆမတန် များပြားနေသည်။ စာသင်ခန်းတစ်ခန်းလျှင်ပင် ကျောင်းသားဦးရေ ၇၀ ကျော်ရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းများကို အချိန်ပြည့်တက်ရန် အခက်အခဲ ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ကျောင်းတက်ချိန် ကို ပုံစံ ၄ မျိုးဖြင့်တက်ရန် ညွှန်ကြားလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ စာသင်ခန်းများအရ Social Distancing နှင့်ညီရန်ဆိုလျှင် အုပ်စု (၄) စု ခွဲ၍ သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ A, B, C, D အုပ်စုခွဲ၍ ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
A. အုပ်စုဆိုသည်မှာ ဆရာ၊ ဆရာမလုံလောက်သည်။ စာသင်ခုံ စာသင်ခန်းလုံလောက်၍ အချိန်ပြည့် တက်နိုင်သောကျောင်းမျိုးဖြစ်သည်။
B. အုပ်စုဆိုသည်မှာ တစ်ပတ်ခြားတက်ရမည် (ဥပမာ-ယခုဖွင့်မည့် Grade-11, Grade 10 ဆိုလျှင် Grade 10 တစ်ပတ်တက်၍ Grade-11 တစ်ပတ်နားပါမည်။ နောက်တစ်ပတ်တွင် Grade-11 တက်၍ Grade-10 နားရပါမည်။
C. အုပ်စုတွင် ၁။ တစ်ပတ်လည်း ခြားရမည်။ နှစ်သုတ်လည်း တက်ရမည်။
D. အုပ်စုတွင် A, B, C သုံးမျိုးတွင် မည်သို့မျှ အဆင်မပြေလျှင် D. အုပ်စုမှာ တစ်ပတ်ခြားတက်ရမည်။ နှစ်သုတ်လည်းတက်ရမည်။ ထို့ပြင်တစ်ပတ် (၃) ရက်သာလျှင် တက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဝါတွင်းကာလ ဖွင့်ရ၊ ပိတ်ရမည့် ရက်များပါ ညွှန်ကြားထားလေသည်။
ယင်းသို့ကျောင်းအမျိုးအစားကွဲသွားရခြင်းမှာ ကျောင်းသားဦးရေ စာသင်ခန်းနှင့် ဆရာ လိုအပ်ချက်အရ ကွဲပြားသွားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းတစ်ကျောင်းစီက ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး စီမံချက်ရေး ဆွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ရာ မိမိတို့ကျောင်း၏ အခြေအနေ မှန်များလိုအပ်ချက်များကို မခြွင်းမချန် တင်ပြကြရန် အရေးကြီးပါသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနှင့် ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် Covid-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ -
သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊ တိုင်းပညာရေးမှူးများ အနေနှင့်လည်း စည်းကမ်းချက်နှင့် ညီ၊ မညီလိုက်လံစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအသင်းအနေနှင့်လည်း ကျောင်းဖွင့်နိုင်ကြရေး စီမံချက်များစနစ်တကျ ရေးဆွဲထားပြီး ဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆိုရလျှင် အခြေခံကျောင်းများသည် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အထက်တန်းဆင့်မှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အလယ်တန်း၊ မူလတန်းစသဖြင့် တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အစိုးရကျောင်းများ မည်သို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်ကို အသေအချာမသိရှိနိုင်သေးသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအများစုမှာ Social Distancing အတွက် ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်း၊ အခြားဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများကိုပင် စီစဉ်နေခြင်းတို့ မြင်တွေ့ရသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖွင့်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေသည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားဆရာအချိုး၊ ကျောင်း အဆောက်အအုံတို့ဖြစ်သည်။ လိုအပ်နေသော ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်သော ကျောင်းများတွင်ပညာရေးကောလိပ်နှင့် ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လုပ်အားပေးဆရာ၊ ဆရာမများအဖြစ် ကူညီရန် စာရင်းလက်ခံလျက်ရှိရာ စာရင်းပေးသွင်းထားသူ ၁၀၀၀ ကျော်ပင်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဆရာ၊ ဆရာမများသည် စာသင်ကြားခြင်းထက် ကလေးများအပူချိန်တိုင်းခြင်း၊ အကွာအဝေးသတ်မှတ်ချက် ပြုလုပ်ပေးခြင်းစသည့် ကျောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကူညီနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းမှာ ရေတိုကာလအဖြစ် ကူညီနိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စင်စစ်ကျောင်းအသီးသီးတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသည်သာဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းဖွင့်စအချိန်တွင် များစွာလိုအပ် နေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုဗစ်ရာသီအတွင်း Volunteers အဖြစ် အကူအညီပေးနိုင်သူမှန်သမျှ ကြိုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးရေတိုကာလဖြစ်သည့်တိုင် ကျောင်း များတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျောင်းသို့ရောက်လာမည့် ကလေးများမှာ မိသားစုမျိုးစုံ၊ နေရာမျိုးစုံမှ လာကြသူများဖြစ်သည်။ ကျောင်းရောက်၍ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာ သို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊ မိဘခေါ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဌာနပို့ခြင်းများ မဖြစ်မနေရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် မည်သည့်ဆရာ၊ ဆရာမများကို အသုံးပြုမည်နည်း၊ ကျောင်းရှိဆရာ၊ ဆရာမများသည် စာသင်ရမည်လော။ အပူချိန်တိုင်းရမည်လော။ မိဘထံပြေး၍ အကြောင်းကြားရမည်လော။ ဆရာ၊ ဆရာမအင်အားနှင့် မမျှလှပေ။
ဤနေရာတွင် ကျောင်းများ၌ ကျောင်းကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကြက်ခြေနီအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်သင့်သည်။ စာရေးသူတို့ ငယ်စဉ်က ပညာသင်ခဲ့ရသည်။ အထက်တန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းများတွင် ကျောင်းကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့များရှိသည်။ ဝါသနာပါသူများဖြင့် ဖွဲ့ထား သည်။ ကြက်ခြေခတ်အနီပါသော ဆေးသေတ္တာပုံး သည် ဆေးဝါးအပြည့်အစုံနှင့် အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ အဖြူအစိမ်းကြက်ခြေနီ လက်ပတ်နှင့် ကျောင်းအတွင်း ရှိ ကျောင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကို တစ်ကျောင်းလုံးက အသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။
မကြာသေးမီကပင်အခြေခံပညာကျောင်း များ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားရန် လူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းသွားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကော်မရှင်အနေနှင့် ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းကို ကျေနပ်အားရကာ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ ကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ထား သည်။ ထို့အတူ ရောဂါကူးစက်မှုကို အစောဆုံး သိရှိနိုင်ရေးသည်လည်း အရေးကြီးသည်ဖြစ်ရာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့် ကျောင်းတိုင်းတွင် သင့်လျော်သည့် ရာထူးအဆင့်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို လက်တွေ့လိုအပ်သည့် အရေအတွက်အထိ တရားဝင်တာဝန်ပေးခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ချိန်တွင် ကျင့်သုံးမည့် စည်းမျဉ်းထဲ၌ ထည့်သွင်းချမှတ်သင့်ကြောင်း၊ ယင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းသည် -
- ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အခြေ အနေကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
- ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများတွင် Covid-19 ရောဂါလက္ခဏာများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ထိုကလေးကို အခြားကလေးများနှင့် သီးခြားခွဲထားကာ မိဘများထံ အကြောင်းကြားခြင်း။
- ယင်းကလေးကို အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိ၍ စောင့်ကြည့်ခြင်း။
- ယင်းကလေးမိသားစုနှင့် အခြားကလေးငယ်များအတွက် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။
- အခြားကလေးများနှင့် ထိုကလေးထိတွေ့မှုကို ခြေရာခံနိုင်ရေး (Contact Tracing) ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ရောဂါထပ်ဆင့်မဖြစ်ပွားရေးအတွက် ထိုကလေး၏ မိသားစုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ကော်မရှင်က တိုက်တွန်းထားပါသည်။
- စင်စစ်ယခုတိုက်တွန်းချက်သည် အခြေခံပညာကျောင်းများအတွက် လိုအပ်နေသည့် ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေသေးသည်။ အထူးသဖြင့် ဆရာ၊ ကျောင်းသား၊ စာသင်ခန်းစသဖြင့် အချိုး မညီဖြစ် နေသေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဆရာ၊ ဆရာမ များမှာ သင်ကြားရေးကို အာရုံစိုက်နေရချိန်တွင် ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ရောဂါကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေး အသိပညာပေးရေးကိစ္စများတွင် ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းအသီးသီး တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းခန့်ထားလိုက်ခြင်းသည် ကျောင်းများတွင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကျောင်း ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ဦးစီးဦးဆောင်လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျောင်းတွင်းမိသားစုအဖြစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပို၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။